ဘယ်အခါမှ မလုပ်နှင့်၊ မပြောနှင့်၊ မကြံနှင့်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:48 PM No comments:
၁။ ခန္ဓာ၏သဘောကို မသိခြင်းကြောင့် ဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်။
၃။ ဖဿကြောင့်လည်း ဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်။ (ဖဿ=ထိတွေ့မှု)
၄။ သညာအမှတ်မှားလို့လည်း ဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်။
လူသိနဲသော ၀ါဆိုလပြည့်နေ့၏ ထူးခြားမှုတခု
# ဝါဆိုလပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အလေးအမြတ်ထားအပ်သော နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါသည်။
##သန္ဓေ ၊ တောထွက်၊ ဓမ္မစက်
ဟောမြွက်သံချို၊ လဝါဆို....ဆိုသည်နှင်အညီ ဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာပဲ ဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား မယ်တော်မာယာ ဝမ်းကြာတိုက်မှာ သန္ဓေယူတော်မူခဲ့တယ်။
#ကြင်ယာတော် ယသော်ဓရာနှင့် သားတော် ရာဟုလာ ကပိလဝတ္ထု ရွှေနန်းတော်ကို စွန့်ခွာပြီးတော့ တောထွက်တာမူခဲ့တာလည်း ဝါဆိုလပြည့်နေ့ပါပဲ။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာလျှင် တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် သေရမည်ကား မုချပင်တည်း။ မိဘ ဆွေမျိုး ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအားလုံး မည်သူမျှ ရှောင်လွှဲ၍ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ထိုသို့သေသွားရာ၌ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိဘဲ သေခဲ့ရလျှင် (သို့မဟုတ်) မသေခင်က ကြိုတင်၍ ကုသိုယ် ကောင်းမှု ရိက္ခာထုပ်များ ကြိုတင်ကာ လုံလုံလောက်လောက် မထုပ်ခဲ့ရလျှင် သေသွားသောအခါ ထောက်တည်ရာမဲ့၊ အားကိုးရာမဲ့ ဖြစ်ရတတ်၏။ ထိုသဘောကို သိသာစေရန် “ရေဗူးနှင့် ဘိနပ်မပါလျှင် နွေခါမှသိမည်။ ဒါနနှင့် သီလမပါလျှင် သေခါမှသိမည်” ဟူ၍ ရှေးဆရာတော်ကြီးများက ဆုံးမခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် တစ်ခုတည်းသာ မျှော်လင့်စရာ ရှိတော့၏။ ထိုအရာကား တစ်ခြားမဟုတ်။
သံသရာခရီးသွားရင်း အမှားလုပ်မိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်ပုံဒုက္ခ ရောက်ကြတယ်ဆိုတာ
မှတ်သားပြီး အမှားမလုပ်မိအောင် သတိဆောင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ သံသရာခရီး သွားနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
တိုင်းဟာ အမှားလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် အမှားလုပ်မိသလဲဆိုရင် အကြောင်းအကျိုး
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 4:41 PM No comments:
စတုက ပဉ္စကအင်္ဂုတ္တရ၌ မိမိကြိုးစား ရရှိထားသော ပစ္စည်းများဖြင့် ဗလိငါးပါးပြုခြင်းကို စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရယူခြင်း အကြောင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဟောတော်မူခဲ့၏။
ပဉ္စဂုင်္တ္တရ၌ အမျိုးသားတို့၏ တိုးတက်ကြီးပွားကြောင်း ၊ မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား ငါးပါးဟောရာ၌ နတ်များကို ပူဇော်ပသခြင်းလည်း တစ်ပါးပါဝင်သည်။ (ပဉ္စက-၆၈) နတ်များ ပူဇော်ခြင်းကို လောကကြီးပွားရေး တစ်ရပ်အဖြစ် ဘုရားရှင်အလိုရှိသည်မှာ သိသာပေသည်။
နတ်ရှိသူဟု ယုံကြည်သူများအဖို့ နတ်များကား သတ္တ၀ါတစ်မျိုးပင် ဖြစ်၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ တစ်နေ့တာ (ချမ်းသာအောင်နေနည်း)”
(၁)။ နေထွက်နေဝင်၊ ကိုးဂုဏ်ရှင်၊ နေ့စဉ်ရှိခိုးမယ်။
(၂)။ အနန္တငါး၊ ဂုဏ်တော်များ၊ ညွတ်တွားကန်တော့မယ်။ (ရွတ်ပွါးကန်တော့မယ်။)
(၃)။ မျက်နှာသစ်လျှင်၊ ရေကိုမြင်၊ မြင်စဉ်မေတ္တာပွါးပါ့မယ်။
(၄)။ သစ်ရင်းသစ်ရင်း၊ လျော့ယိုယွင်း၊ ရုပ်ဆင်းသတိထားပါ့မယ်။
(၅)။ မသန့်မစင်၊ ရေအိမ်ဝင်၊ ဆင်ခြင်အသုဘ ပွါးပါ့မယ်။
ရဟန်းတော်တွေ သစ်ပင်မခုတ်ရ ဆိုတဲ့ ပညတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရုက္ခစိုးတစ်ဦးရဲ့
ဒေါသ ထိန်းနိုင်ပုံကို မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားတာရှိပါတယ်။ “ မြင်းရထားမောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
မြင်းရဲ့ဇတ်ကိုနိုင်အောင် ထိန်းနိုင်ပေမယ့် တကယ့်ရထားထိန်းလို့ မခေါ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ဒေါသကို
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:35 PM No comments:
“ဗုဒ္ဓရဲ့ နဖူးသင်းကျစ်တော်” •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ဆရာတော် အရှင်သူမြတ်ဘုရား၊ တပည့်တော် သိချင်တာကလေး နှစ်ခု မေးလျှောက်လိုပါတယ်ဘုရား။ (၁)။တပည့်တော်ရဲ့ မိခင် မြန်မာနိုင်ငံက ပင့်လာတဲ့ ကျောက်ဆင်းတုတော်ရဲ့ နဖူးတော်မှာ ထူးခြားတဲ့ အရာတစ်ခု ပါရှိနေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ သင်းကျစ်တော် ခေါ်တယ်လို့ မိခင်က ပြောပါတယ်ဘုရား။အဲဒါလေးနဲ့ ပတ်သက်တာကို ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ဘုရား။ (၂)။စေတီတော်တွေက ရောင်ခြည်ထွက်တယ်လို့ ကြားဖူးပါသည်ဘုရား။ ကိုယ်တိုင် တစ်ခါမျှ မဖူးမြင်ဘူးပါ။ ဘာကြောင့် ဘယ်လို ရောင်ခြည် ထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိလိုပါသည်ဘုရား။ (မြမြမြိုင်)
လွန်ခဲ့သောနှစ် တပေါင်းလပြည့်နေ့ညတွင် မြိုင်သာယာရွာ၌ နှစ်စဉ်မပျက်ကျင်းးပမြဲဖြစ်သော ရွာဦးဘုရားစေတီကြီးတွင် မီးထွန်း
ဘုရားပွဲတော်ကြီးတွင် အငြိမ့်ပွဲ၊ မျက်လှည့်ပွဲများဖြင့် ညဘက်တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်လှပါ၏။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာများမှနွားလှည်း
များဖြင့် ပွဲလာကြည့်ကြသည်မှာလည်း စည်စည်ကားကားပင်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ လက်ထက်တော်ကာလတုန်းက အရှင်ပုဏ္ဏဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တော့
မြတ်စွာဘုရားဆီလာပြီး “ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် ဆုံးမသြ၀ါဒ
တရားလေး ဟောပေးပါ, အရှင်ဘုရား ဟောထားတဲ့အတိုင်း တပည့်တော်ဟာ အားတက်သရော
ဗုဒ္ဓဘာသာ/ သာသနာအတွက် အသိပညာပေး ဆောင်ပုဒ်များ(၆)။
“ ဘာသာဝါဒ ရွေးချယ်ကြ ”
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 3:30 PM No comments:
အခုဒီမှာ ထိုင်နေတယ်နော်...။ ကိုယ့်လက်နှင့် လက်နှစ်ခုထိနေတယ်။ ဟိုဒကာကြီးဆိုလည်း လက်နှင့်လက်ထိထားတယ်။ ဟိုဒကာကြီးကလည်း လက်နှင့်လက်ထိထားတယ်နော်။ အဲဒီထိထားတဲ့နေရာကို စိတ်နှင့် အာရုံပြုကြည့်စမ်းပါ။
ဘယ်လိုအာရုံမျိုး၊ ဘယ်လို sensation မျိုး၊ ဘယ်လို feeling မျိုးရှိလဲ?
အင်း...။ ဟုတ်တယ်။ နွေးနေတယ်နော်။ အဲဒါ နွေးနေတာ sensation တစ်ခုဘဲ။ ဒီမှာ သေချာကပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါအုံး။
သူ့မှာ လှုပ်နေတာတစ်ခုခုရှိနိုင်သလား? ရှိသလား?